AmaVenture Capitalists Akhukhule Imali Ku-Crypto Space Ngo-2021 | Klever Ezezimali
Isamba semakethe ye-cryptocurrency sifinyelele ku-$3 trillion ngo-2021, ngokombiko we-PitchBook Data.
Ukukhuphuka kwenani lemakethe kufike njengoba izimali zebhizinisi emhlabeni wonke zitshale imali elinganiselwa ku-$30 billion ku-cryptocurrency ngo-2021.
Osonhlamvukazi abatshala imali ekuqaliseni abathengi babhala amasheke amaningi ezinkampanini ze-crypto kunangaphambili. Amadili agcizelela ukuthi ubuchwepheshe be-blockchain bubumba kabusha kanjani izimboni ezifana nemidlalo kanye ne-e-commerce, kanye nomshwalense uphusha abatshalizimali abathengi asebenesikhathi eside ukuthi bazenze kabusha njengabasekeli be-crypto. Abatshalizimali bathele ama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-3.7 emidlalweni esekelwe ku-cryptocurrency, ezentengiselwano, kanye neziqalo zokuthenga kulo nyaka, okuhlanganisa indawo yemakethe yamathokheni e-OpenSea engabonakali.
Imboni ye-cryptocurrency isakhula, futhi kunendawo engapheli yokukhula. Amafemu amaningi e-VC ayazi ukuthi ikusasa ele-crypto, futhi abafuni ukuphuthelwa yilelo okungenzeka libe yithuba elikhulu lokutshala imali esikhathini sethu.
Noma kunjalo, imakethe ye-crypto isalokhu iguquguquka, kodwa amafemu e-VC aqinisekayo ku-blockchain kanye nezinkampani ze-cryptocurrency zilungele ukuthatha ingozi eyengeziwe. Nakuba kubhekwa njengendlela evamile yokuxhasa ngemali, izimali ze-VC ziya ngokuya zibheka i-crypto ngenxa yokwamukelwa okujwayelekile. Kubangelwa izinkundla ezinkulu zokukhangisa ezifana ne-Facebook ne-Google ezinquma ukususa ukuvinjelwa kwazo ezikhangisweni ze-crypto. Ngaphezu kwalokho, ngokutholwa okujwayelekile ngabatshalizimali bezikhungo, ama-VC abuka imboni ye-crypto njengotshalomali olungenabungozi kangako. Isikhala se-DeFi kanye nemakethe ye-non-fungible token (NFT) ngezinye zezindawo ezidume kakhulu embonini ye-crypto eheha izimali zebhizinisi..
Amafemu aphezulu e-VC atshala imali ku-blockchain kanye ne-cryptocurrency
I-Digital Currency Group, i-NGC Ventures, i-Coinbase Ventures, i-Pantera Capital, i-Plug ne-Play Tech Center, i-Fenbushi Capital, i-Andreessen Horowitz, i-Lightspeed Venture Partners neqembu lemali ye-Digital eyenza amadili aphezulu angu-197 we-Blockchain kanye ne-crypto kanye ne-Fenbushi Capital ene-133 Blockchain ephansi kanye namadili e-crypto.
Ukuthengiselana okukhulu okuholele ekutheni ukutshalwa kwezimali kwe-crypto kuthinte uphawu lwama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-30 kwaba -imali engu-$1-billion ephakanyiswe yi-crypto derivatives exchange FTX, i-Custodian New York Digital Investment Group ikhulise i-$1 billion, umhlinzeki wethuluzi lokuhlanganiswa kwe-blockchain, i-Forte, ivala i-$ 725. -imali eyizigidi, i-MoonPay ithola uxhaso lwezigidi ezingu-555 zamaRandi, kanye nesiteji se-NFT i-Dapper Labs enyusa amaRandi ayizigidi ezingu-350,
U-Fred Ehrsam kaCoinbase kanye nomlingani wangaphambili we-Sequoia uMat Huang bakhulise i-$ 2.5 billion yeParadigm One. Idlule isikhwama se-crypto sika-Andreessen Horowitz kusukela ekuqaleni kwalo nyaka, esikhulise u-$ 2.2 billion. Abasunguli beParadigm babona amathokheni njengokuthembisa ukutshalwa kwezimali kwesikhathi eside.
Onxiwankulu base-Europe batshale imali eyirekhodi engu-$2.2 billion ezinkampanini ze-crypto kanye ne-decentralized finance (DeFi) ngo-2021, ngokusho kwedatha evela kwaDealroom. Basekela izimakethe zezimpahla zedijithali njengama-NFT; ingqalasizinda yezinkokhelo; ezezimali ezihlukene, iziqalo. Inkundla yokuhweba ye-NFT egxile ebholeni laseFrance i-Sorare yaba i-unicorn ngo-2021 ngemuva kokuthi inyuse umjikelezo woxhaso we-Series B wama- $ 680 wezigidi oholwa yinhlangano yaseJapan iSoftBank.
Inkampani ekhokha imali ye-crypto ezinze eLondon i-Ramp, esanda kukhulisa amaRandi ayizigidi ezingama-53 iholwa yi-Balderton Capital ngokubamba iqhaza kwabatshalizimali abakhona i-NFX, i-Galaxy Digital, i-Seedcamp, i-Firstminute Capital.
I-Crypto exchange platforms CoinDCX kanye ne-Coinswitch Kuber - ama-unicorns amabili amasha e-crypto e-India eyedwa eyedwa athole cishe u-60% wenhloko-dolobha eqoqwe kulo nyaka.I-CoinDCX iqoqe amaRandi ayizigidi ezingu-90 kumjikelezo woxhaso we-Series C ngenani lika-$1.1 billion, waba umNdiya wokuqala ukushintshaniswa kwe-cryptocurrency ukuze kuzuzwe isimo se-unicorn phakathi nokungaqiniseki kokulawula phezu kwempahla ye-crypto.
Uxhaso beluholwa yiB Capital Group, eyasungulwa umsunguli we-Facebook u-Eduardo Saverin. Abatshalizimali abakhona abanjengoCoinbase Ventures, Polychain Capital, Block. eyodwa, kanye neJump Capital nayo ibambe iqhaza emzuliswaneni.
I-Cryptocurrency exchange Coinswitch Kuber ngo-Okthoba 6 ithe ikhulise ngaphezu kwezigidi ezingu-260 zamaRandi eholwa abatshalizimali abasha Coinbase Ventures kanye nesikhwama esiphezulu seSilicon Valley Andreessen Horowitz (a16z), ekhuphuka ukulinganisa kwayo izikhathi ezine ezinyangeni eziyisithupha kuya ku-$ 1.9 billion.
Izizathu zokuthi kungani onxiwankulu beVenture bethela izigidigidi zamadola ku-crypto
Ibhulokhi ethile yomphakathi ethize yeBlockchain isiphazamisi semakethe esingaba khona uma kukhulunywa ngokushintsha indlela ukusetha izinkokhelo zendabuko okusebenza ngayo njengoba ukuthengiselana okusekelwe ku-blockchain kungaqinisekiswa yinoma ngubani uma bekwazi ukufinyelela ku-inthanethi.
Naphezu kokushintshashintsha kwentengo, abathengisi abaphezulu bavumela abathengi ukuthi bakhokhe besebenzisa i-Bitcoin ne-Altcoins. Njengoba abathengi bethola ukufinyelela kumasevisi ahlobene ne-crypto esikhathini esizayo, ukwamukelwa kulindeleke kuphela ukuthi kuqhubekele phambili ukusuka lapha.
Ama-Cryptocurrencies kancane kancane enza isikhala sizimele ngokunqamula abantu abaphakathi abalawula imali yethu esiyisebenze kanzima.
Onjiniyela emhlabeni wonke banikela ngokungakhathali endaweni yezimayini ye-crypto, kuyilapho behlela izindlela ezintsha zokwenza inqubo ingabi namandla kakhulu ngesikhathi. Ngaphezu kwalokho, abadlali abasha be-crypto bayavela usuku ngalunye ngesivinini esingcono sokuthengiselana, ukusethwa okuthuthukisiwe kokuthuthukiswa kwesoftware. , kanye nekhono lokukhiqiza amabhlogo ngokushesha
Abatshalizimali emhlabeni wonke batshala imali enkulu futhi bahamba isikhathi eside kuma-cryptocurrencies. Ngokwedatha ye-triple-A kusukela ngo-2021, izilinganiso zobunikazi be-crypto emhlabeni jikelele zilinganiselwa ku-3.9%, nabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingu-300 emhlabeni jikelele. Futhi amabhizinisi angaphezu kwe-18,000 asevele ayamukela izinkokhelo ze-cryptocurrency.
Esinye sezishayeli ezinkulu zokwamukela i-crypto emhlabeni jikelele kube yintshisekelo ekhonjiswe abadlali abafana ne-Microstrategy kanye ne-Tesla.Tesla ithenga u-$1.5 billion ku-bitcoin ekuqaleni kwalo nyaka ngokubamba ama-Bitcoins angu-42,902 kanye ne-MicroStrategy manje isiphethe isamba sama-bitcoins angu-121,044, abiza cishe u-$7 billion. amanani amanje.
Njengoba i-El Salvador iyizwe lokuqala ukumemezela i-Bitcoin njengethenda esemthethweni futhi ohulumeni emhlabeni wonke babheke ngabomvu ukulawula indawo.
Kulabo abakholelwa ezicini ezihlosiwe zemali, i-cryptocurrency ivela njengoshintsho olunethemba. Amanani akhuphuka eceleni, i-cryptocurrencies ethandwa kakhulu njenge-Bitcoin ne-Ethereum ibonise inani elikhulu, inxusa abatshalizimali ukuthi bangene kulesi sikhala, ngokombono ohlanganisayo. Unyaka ka-2021 ubonakala uphakamisa olunye ushintsho lwe-blockchain kanye ne-cryptocurrency, olungabeka lobu buchwepheshe kahle kakhulu kunokuphakama kwabo kwangaphambilini.
Kunenqwaba yezinto ezinomthelela ekuphusheni esikubonayo njengamanje. Okunye okubaluleke kakhulu phakathi kwazo ukukhula kokulungela imboni, kokubili ngokombono wezobuchwepheshe kanye nemibono. Sikholelwa futhi sicabanga amashumi eminyaka esikhathini esizayo kucace kakhulu ukuthi amabhizinisi amakhulu emhlabeni azonikwa amandla ngamathokheni.
Uma ungumtshalizimali we-crypto futhi usangabaza ngesikhala se-crypto, landela onxiwankulu be-Venture nemali enkulu.
Isilinganiselwa: 4.56 Amavoti: 9
Ngingumbhali wezindaba ozinze eNdiya Klever. Uthole iziqu eRamaiah Institute of Technology wathola iziqu zeBiotechnology. Usebenze njengonjiniyela we-supply chain e-Bangalore. Ngingathanda ukucwaninga i-Web 3.0, I-Cryptocurrencies, kanye nekusasa elihlukaniselwe izwe kuyilapho ngabelana nawe ngolwazi.